a'21 Techno Utopia x I-Post-Digital Ignorance · Oyoun | Inkcubeko entsha yokucinga
I-A'21 Techno Utopia x Post-Digital-Ukungazi
I-Oyoun eBerlin ivelisa umnyhadala obonisa ubugcisa kuphuhliso lobuchwephesha kunye neengxoxo zentlalo nezopolitiko ezigxeka amandla: ngamagcisa angama-69, izazinzulu kunye namatshantliziyo kumazwe ali-16 (i-Afrika / i-SWANA / iYurophu / i-Asiya) kunye ne-LAB yokusebenzisana egqibeleleyo, iyonke ngaphezulu kweminyhadala engama-50: ukusebenza, iiwekhishophu, iiphaneli, ukuhlolwa, i-VR hackathon, nokunye okuninzi.
Umthendeleko we-Amber Network A21 +++ Techno Utopia x Post-Digital-Ignorance +++ Umthendeleko we-Amber Network A21 +++ Techno Utopia x Post-Digital-Ignorance +++ Umthendeleko we-Amber Network A21 +++ Techno Utopia x Post-Digital-Ignorance +++ Umthendeleko we-Amber Network A21 +++ Techno Utopia x Post-Digital-Ignorance +++ Umthendeleko we-Amber Network A21 +++ Techno Utopia x Post-Digital-Ignorance +++
Ifuthe njani Itekhnoloji utshintsho lwentlalo nenkcubeko? Ukufikelela ngokungathintelwanga kulwazi nakwinkcukacha kulola ukuqonda okubalulekileyo koluntu okanye iyandisa ukungazi, uloyiko kunye nokungazi? Ngaba utshintsho lwetekhnoloji lunokuzisa inkululeko yedemokhrasi okanye Ngaba siphupha nge-techno utopia? Zingaqhekeka njani izakhiwo zamandla kwaye zitshintshwe ngongenelelo olubalulekileyo lobugcisa?
Ulwazi lufuna ukuthatha uxanduva kwizizukulwana ezizayo kunye nophuhliso lwentlalo. Nangona kunjalo, kubaluleke ngakumbi ukunamathela kufikelelo kulwazi ngetekhnoloji yedijithali kunokungenisa kwayo: kutheni ukufunda nokuqonda into xa ihlala ifikeleleka? Emva kwesakhono kukho isixhobo esinamandla esenza ukungazi.
Le nto ibizwa ngokuba yi "Post-Digital Ignorance". Oko kuthetha ukuba kukhula kokungazi koluntu kunye nolwazi lomntu ngobuchwepheshe bedijithali. Ixhalabile ukujongana nezihloko ezingathandekiyo ezinje ngokutshintsha kwemozulu, amava okufuduka, idatha enkulu kunye ne-biohacking. Iziphumo zoku kungazi zikwangumbuzo wobumbano kunye nokuxhotyiswa. Ubugcisa busebenza njengesixhobo esiguqukayo ekubonakaliseni ngokunzulu iteknoloji, ulawulo kunye namandla, ukucinga kwakhona nokwenza ulwazi loluntu
Nge Umnyhadala we-a'21 -Iposti yedijithali yokungazi x Techno Utopia Sifuna ukucela umngeni kwisimo se-quo kwaye sijolise kwiimbono kubomi obungengobomntu, i-ecology ye-ecology, ukumiswa kolwazi kolwazi, amava eenqwelomoya nokunye.
Iveliswe ngu: I-Oyoun Berlin ngokusebenzisana ne-amberPlatform
UMlawuli wezobuGcisa: U-Ekmel Ertan
Iqela leCuratorial: Amirali Ghasemi, Ali Cem Doğan, Cenkhan Aksoy, Christoph Wachter, Ebru Yetişkin, Hamza Chamas, Mathias Jud, Milad Forouzandeh, Mohsen Hazrat, Nina Martin, Rajaa Shamam, Youssef El Idrissi
nge: U-Eda Sütunç, uDanielle Brathwaite-Shirley, uMary Maggic, uRachel Uwa, uRenata Salecl, uSeloua Luste Boulbina, uPelin Tan, uYara Mekawei, nabanye abaninzi.
Ixhaswe ngu: INgxowa-mali yeNkcubeko yeDolophu yaseBerlin (HKF)
Inkqubo yomnyhadala eneenkcukacha zabo bonke ababandakanyekayo apha
Imibuzo yeendaba neendaba: hello@oyoun.de
Ngama-69 + amagcisa, izazinzulu kunye namatshantliziyo kumazwe ali-16 #SWANA #AFRIKA #EUROPE #ASIA enezinto ezili-13 ezingaqhelekanga ezisebenzisana ngokugqibeleleyo ngaphakathi kwilabhoratri enzulu ngelixa ibamba imicimbi engaphezulu kwama-50: incl. Imiboniso, iindibano zocweyo, iipaneli, izandi, izifundo, imiboniso, ukuhlolwa kunye ne-hackathon ye-VR yehlabathi jikelele.
Kumashumi ambalwa eminyaka edluleyo kungqinwe Ukwanda okumangalisayo kwetekhnoloji yedijithali. Ukubhekiswa kwi-techno-utopia apho ulwazi luya kufumaneka khona kuye wonke umntu kwabonakala ngathi luphawu olunokubakho lotshintsho oluhle kwezentlalo nakwezenkcubeko ngelixa livuma isiphako esisisiseko. Ukuzibophelela kwetekhnoloji yedijithali ekwenzeni ukuba ulwazi lufikeleleke kubo bonke kuya kuthi kuvelise isibonelelo sendalo kunye nokuba sempilweni okuye kwafunyanwa kodwa Itekhnoloji yedijithali ayikhange ibangele iziphumo kwi-techno utopia.
Kuye kwacaca ukuba ngaphandle kokuvumela ulwazi oluninzi lufikeleleke kubantu abaninzi, ubuchwepheshe bezedijithali zikwizixhobo ezinamandla ezivelisa uhlobo olwahlukileyo lokungazi koluntu, olo lubonakala ngathi luyanda phakathi kolwazi olwandayo kunye nolwazi olufumanekayo kwindawo yanamhlanje yedijithali.
Ukungazi kuqhubeka kuxhaswa yimifanekiso yetekhnoloji yolwazi yanamhlanje. Inkulu, inxulumene kwaye ilawula zonke iinkalo zobomi bethu. Ulawulo lwe-algorithmic, ubukrelekrele bokuzenzela, kunye nolwazi lobuchwephesha kwezobugcisa ukuya kwezenzululwazi, kwezopolitiko, nakwinkcubeko edumileyo yenza uloyiko lokwazi apho abantu abaqhelekileyo baziva ngathi bangaphantsi kulwazi olukhulu kunye namandla okuyiqhuba. Kukho izinto esinokuzazi, siyathanda ukuzazi, kufuneka sizazi, sinelungelo lokwazi kwaye kufuneka sazi; kunye "nokungazi" ngokwahlukeneyo. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi inkcubeko yangoku yokungazi ihamba kakuhle kwaye iba sisimo esiqhelekileyo kwihlabathi liphela.
kunye Umnyhadala we-a'21 -Iposti yedijithali yokungazi x Techno Utopia, Sijonge ukucela umngeni kwimeko yelixa sigxile kwizimvo ezingezizo ezomntu, i-ecology ye-ecology, ulwazi lokwenza ikoloniyon kolwazi, ukufuduswa ngenkani, nokunye okuninzi.
Isikhokelo sobugcisa: U-Ekmel Ertan
Abathathi-nxaxheba baquka: Eda Sütunç, Danielle Brathwaite-Shirley, Mary Maggic, Rachel Uwa, Renata Salecl, Seloua Luste Boulbina, Pelin Tan, Yara Mekawei, nabanye abaninzi.
Ixhaswe ngu: INgxowa-mali yeNkcubeko yeNkcubeko (HKF)
Inkqubo epheleleyo yomnyhadala kunye noluhlu lwabo bonke abathathi-nxaxheba abakhoyo Apha.
Kwimibuzo yemithombo yeendaba kunye nemithombo yeendaba nceda unxibelelane nathi apha hello@oyoun.de